Grossular waa noocyada calcium-aluminium ee kooxda garnet - video
Iibso dukaanka dabiiciga ah ee hessonite dabiiciga ah
Grossular waa noocyada calcium-aluminium ee kooxda garnet ee macdanta. Waxay leedahay kiimikada Caymiska ee Ca3Al2 (SiO4) 3, laakiin calcium waxaa laga yaabaa, in qayb ahaan lagu beddelo bir bir ah dhoobo iyo aluminium by iron. Magaca macmiilka waxaa laga soo qaatay magaca botanical ee miro yar, grossularia, marka loo eego garo cagaaran oo ka kooban Halabadan oo laga helo Siberia. Muraayadaha kale waxaa ka mid ah buniga qoraxda (noocyada dhagaxda qoraxda), casaan, iyo jaalle. Grossular waa dhagxaan. xarriiqdiisa waa caddaan cad
Qorista suugaanta, macmiilka badanaa waxaa loo yaqaan 'grossularite'. Laga soo bilaabo 1971, si kastaba ha ahaatee, isticmaalka ereyga "grossularite" ee macdanta ayaa looga niyad-jabay ururka Mineralogical Association.
Hessonite ama "dhagaxa qoraxda" waa noocyo kala duwan oo caan ah oo leh qaabka guud: Ca3Al2Si3O12. Magaca ayaa ka yimid Giriigga hore: Hesson, macneheedu waa mid ka sii xumaanaya, ciriiri darajo hoose iyo cufnaanta hoose ee noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee garnet noocyada kale ah.
Waxay leedahay midab casaan ah, oo ku jilcaya orange ama jaalle, sida badan oo ah zircon. Waxaa la muujiyay sanado badan kahor, by Sir Arthur Herbert Church, in muraayado badan, gaar ahaan alaabada la xiiray (sida caadiga ah loo arko inay yihiin zircon), dhab ahaantii hessonite. Farqiga waxaa si sahlan loo ogaanayaa culeyska gaarka ah, in hessonite uu yahay 3.64 ilaa 3.69, halka kuwa zircon ay ku saabsan tahay 4.6. Hessonite waxay u egtahay mid la mid ah quartz (oo ku saabsan 7 oo ku saabsan qiyaasta isku xirka), halka xajmiga nabraha intooda badani ku dhow yahay 7.5.
Hessonite ayaa si weyn uga soo jeeda Sri Lanka iyo Hindiya, halkaasoo guud ahaan laga helo bakhaarro xayeysiin ah, inkasta oo ay dhacdooyinkeeda ku dheehan tahay mid aan la aqoon. Waxaa sidoo kale laga helaa Brazil iyo California.
Grossular waxaa laga helaa xayawaanka qumman ee miyir-qabadka leh vesuvianite, diopside, wollastonite iyo wernerite.
Gacan badan oo la raadinayo noocyo kala duwan oo geel ah garnet waa cagaarka cagaaran ee cagaaran ee Kenya iyo Tanzania oo loo yaqaan 'tsavorite'. Garnet-ka ayaa laga helay 1960s oo ku taal aagga Tsavo ee Kenya, kaas oo maraakiibta ay magaceeda ku qaataan.
Viluite waa noocyo kala duwan oo macquul ah, taas oo aan ahayn noocyada macdanta la aqoonsan yahay. Inta badan waa cagaaran saytuun ah, mararka qaarkood waxay noqdaan brownish ama guduudan, oo ay keenaan qashin-xayawaan. Viluite waxaa laga helaa oo la mid ah muuqaalka muuqaalka vesuvianite, waxaana jira jahwareer ku jira terminology maaddaama mudaharaadku muddo dheer loo adeegsaday sidii isku midka ahayd wiluite, oo ah maqosilicate ee kooxda vesuvianite. Jahawareerkan magaciisu ku yaallo magaca James Dwight Dana. Waxay ka timaaddaa tuulada Vilyuy ee Siberia.
Grossular waxaa loo yaqaan magacyo kale, iyo sidoo kale qaar qalafsan, colophonite - granules-aan dhab ahayn ee garnet, ernite, gooseberry-garnet - iftiin cagaaran oo qurub ah, olyntholite / olytholite, romanzovite, iyo tellemarkite. Misnomers waxaa ka mid ah dabiiciga Koonfur Afrika, jadeecada garee, jasiirada transvaal, iyo dabiiciga Africa.
Qoryaha guud, oo ka soo jeeda Mali